पहिला शाकाहारी, अनि सरल जीवन !
२०७८ श्रावण १० आइतबार | 2021 July 25
२०७८ असार २७ गते १३:०१:०० मा प्रकाशित
मानिसको भोजनका बारेमा पौराणिक कालदेखि नै ध्यान दिएको पाइन्छ । यसै कारण पौराणिक कालमा खानाबा बारेमा निकै महत्वपूर्ण दृष्टिकोणहरु आएका पाइन्छन् । पौराणिक काल मै खानालाई तीन प्रकारले विभाजन गरिएको छ । तामास्विक, सात्विक र राजस्विक ।
फलफूल, सागपात , ताजा खानेकुराहरु जसले शरीरलाई स्वास्थ्य बनाउँछ, त्यसलाई सात्विक खाना भनेर ब्याख्या गरेको पाइन्छ ।
मांसाहारी खाना, बासी खाना, धेरै चिल्लो, गुलियो खानाहरुलाई तामास्विक खाना भनेर ब्याख्या गरिएको पाइन्छ । यी खानाहरुले शरीर र मनलाई नकारात्म असर गर्छ ।
जुन खानाले शरीर र मस्तिष्कलाई क्रियाशील बनाउँछ त्यो खानालाई राजस्विक खाना भनिन्छ । राजस्विक खाना स्वादिष्ट, मसलादार हुन्छन् । यी खानाको बढी प्रयोग गरेमा मस्तिष्कलाई अत्याधिक क्रियाशील बनाइ उत्तेजना बढाउँछ । जसले शरीरमा नकारात्मक असर गर्छ, भनिएको छ ।
शाकाहारी मानिसमा न कसैको डाहा हुन्छ । न त कसैप्रति शंका नै हुन्छ ।
शरीर र मनलाई स्वास्थ्य बनाउन शाकाहारी खाना आवश्यक छ । शाकाहारी खानाले शरीरलाई बलियो, मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो र क्रियाशील बनाउने विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानहरुले जनाएका छन् । शाकाहारी बन्नु आफैमा सरल बन्नु हो । खानपानले मानिसको स्वभावलाई परिवर्तन गरिदिन्छ । सबै सरल बन्न चाहन्छन् । तर सरल बनाउने महत्वपूर्ण उपाय शाकाहारी बन्न भने कोही चाहँदैनन् ।
आज मानिसको स्वास्थ्यमा खराबी आउनुको मुख्य कारण खानपिन हो भन्ने तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरेको अवस्था छ ।अमेरिकाको एक जर्नलको अनुसन्धानका अनुसार - शाहाकारी खानाले मोटोपन घटाउनका साथै व्यक्तिको काम गर्ने क्षमतामा पनि बढाउँछ । उक्त अनुसन्धानले शाकाहारी खानाको प्रयोग गर्ने मानिसको गुणस्तरीय जीवन भएको प्रमाणित गरेको छ ।
शरीर र मनलाई स्वास्थ्य बनाउन शाकाहारी खाना आवश्यक छ । शाकाहारी खानाले शरीरलाई बलियो, मानसिक स्वास्थ्यलाई राम्रो र क्रियाशील बनाउने विभिन्न वैज्ञानिक अनुसन्धानहरुले जनाएका छन् ।
सम्पूर्ण रोगको एउटै कारण खाना र जीवन शैली हो, भन्ने कुरालाई पनि विज्ञान समेतले प्रमाणित गरिदिएको छ । अमेरिकन डाइबेटिज एसोसिएसनले- डाइबेटीज ,उच्च रक्तचाप,मोटोपन,मुटुरोग ,मस्तिष्कघात र केही क्यान्सरहरुको रोगथाम मात्रै होइन, उपचारमा पनि शाकाहारी खानाको धेरै प्रभाव पर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
मानिस शाकाहारी प्राणी हो, भन्ने कुरालाई समेत विज्ञानले स्वीकार गरेको छ । आममानिसले पनि शाकाहारी खानामा औषधिजन्य गुण हुन्छ भनने कुरालाई आत्मसाथ गरेको पायन्छ । तर त्यही कुरालाई व्यवहारमा लागु गरेको पाइँदैन । शाकाहारी खानामा एन्टी अक्सिजेन्टको मात्रा बढी हुन्छ । एन्टी अक्सिजेन्टको मात्रा मांसाहारीमा खानामा पाइदैन । क्यान्सर ,मुटुरोग लगायतका किटाणुलाई नष्ट गर्ने काम एन्टी अक्सिजेन्टको मात्रा बढी भएका खानेकुराले गर्छ ।
अमेरिकन डाइबेटिज एसोसिएसनले- डाइबेटीज ,उच्च रक्तचाप,मोटोपन,मुटुरोग ,मस्तिष्कघात र केही क्यान्सरहरुको रोगथाम मात्रै होइन, उपचारमा पनि शाकाहारी खानाको धेरै प्रभाव पर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
शाकाहारी खाना, सागपात ,फलफूलहरुमा फाइटोकेमिकल (Phytochemical) बढी पाइन्छ । यसले पनि क्यान्सर र मुटुरोग हुनबाट बचनउने कुरालाई चिकित्सकहरुले दावी गर्छन् । । शाकाहारी खानामा धेरै फाइबर हुन्छ । मांसाहारीमा कम हुन्छ । फाइबरयुक्त खानाले कोलिस्टोर घटाउँछ, साथै आन्द्रा सम्बन्धी धेरै रोगबाट लाग्नबाट बचाउँछ ।
मांसाहारी खानामा सोडियमको मात्रा बढी हुन्छ । पोटासियम र म्यागनेसियमको मात्रा भने कम हुन्छ । सोडियमको मात्रा बढी हुँदा मानव शरीरलाई कमजोर बनाउँछ । रोग लाग्नमा सहयोग पनि गर्दछ ।
शाकाहारी खाना मानव शरीलाई कति उपयुक्त हो, भन्ने कुरालाई त विज्ञचिकित्सकहरुले नै प्रमाणित गरिदिएका छन् । विभिन्न अनुसन्धान र चिकित्सकका कुराहरुलाई अध्ययन गर्ने हो भने , छाला,नङ र कपाललाई स्वास्थ्य बनाउन शाकाहारी खानामा भएका पदार्थहरु अत्यान्त लाभदायीक हुने देखिन्छन् ।
शाकाहारी खानामा भने सोडियमको मात्रा कम हुन्छ । शाकाहारी पोटासियम र म्यागनेसियम बढी हुन्छ । यसले गर्दा शाकाहारी खाना खाने व्यक्तिको प्रेसर मांसाहारीको तुलनामा कम हुन्छ । मुटु रोग र मधुमेह हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
शाकाहारी खाना मानव शरीलाई कति उपयुक्त हो , भन्ने कुरालाई त विज्ञचिकित्सकहरुले नै प्रमाणित गरिदिएका छन् । विभिन्न अनुसन्धान र चिकित्सकका कुराहरुलाई अध्ययन गर्ने हो भने ,छाला,नङ र कपाललाई स्वास्थ्य बनाउन शाकाहारी खानामा भएका पदार्थहरु अत्यान्त लाभदायीक हुने देखिन्छन् । आँखा र हड्डीलाई स्वास्थ्य बनाउन पनि शाकाहारी खाना उपयुक्त हुन्छ ।
शाकाहारी खानाले मानव स्वास्थ्यलाई मात्रै राम्रो गर्ने होइन । समाज शाकाहारी बन्दा वातावरणमा समेत सन्तुलन आउँछ । हजारौ वर्ष अघिका धर्म ग्रन्थ, शास्त्रहरुमा पुष्टि भएका विषयहरुमा नै अहिले वैज्ञानिक अनुसन्धान भइरहेका छन् । फेरि पनि ती अनुसन्धानहरुले पौराणिक ग्रन्थहरुले गरेका दावीहरुलाई नै प्रमाणित गर्दै आएको पनि छ ।
शाकाहारी खानेकुरा खाने व्यक्तिमा कुनैकुनै न्युटिसनको कमी हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर अनावश्यक न्युटिसन हुने सम्भावना भने हुँदैन । यता मांसाहारी व्यक्तिमा न्युटिसनको कम हुदैँन । बरु अनावश्यक न्युटिसन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । शाकाहारी मानिसमा न्युटिसनको कमी भएपनि स्वास्थ्यमा त्यति धेरै असर गर्दैन । तर मांसाहारी खानेमा अनावश्यक न्युटिसनका कारणले स्वास्थ्यमा नगरात्मक असर पार्छ ।
शाकाहारी खानेकुरा खाने व्यक्तिमा कुनैकुनै न्युटिसनको कमी हुन सक्ने सम्भावना पनि छ । तर अनावश्यक न्युटिसन हुने सम्भावना भने हुँदैन । यता मांसाहारी व्यक्तिमा न्युटिसनको कम हुदैँन । बरु अनावश्यक न्युटिसन हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
शाकाहारी खाने मानिसहरुमा पनि प्रोटिन ,आइरन, क्यालसियम,भिटामिन बि र भिटामिन डी लगायतको कमी हुन सक्छ । तर अनुसन्धानले यो प्रमाणित गरेको छ कि । यदि शाकाहारी खानाको राम्रो व्यवस्थापन गरे एउटा बच्चा, गर्भवती या वृद्धले पनि शाकाहारी खानामा मात्रै निर्भर भएर स्वास्थ्य हुन सक्छ ।
मांसाहारी व्यक्तिको तुलनामा शाकाहारी व्यक्तिलाई सागपात ,फलफूल बढी खानु पर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एउटा स्वास्थ्य व्यक्तिले दिनमा ५ पटक फलफूल र सागपात खानुपर्छ । तर जो व्यक्ति शाकाहारी छ , उसले चाहिँ ७–८ पटक आनुपर्छ ।
शाकाहारी मानिसमा रिसराग, व्देष निकै कम हुन्छ । अनावश्यक महत्वाकाँक्षा पनि शाकाहारी व्यक्तिमा हुँदैन । शाकाहारी मानिसमा न कसैको डाहा हुन्छ । न त कसैप्रति शंका नै हुन्छ । शाकाहारी मानिस स्वस्थ हुने हुँदा उनीहरु सधै फुर्तिला देखिन्छन् । विज्ञहरुका अनुसार शाकाहारी मानिसमा डिप्रेसनको समस्या आउँदेन ।
(यो लेख विभिन्न विज्ञका प्रवचनहरु र लेख अनुसन्धानहरुका अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको हो । -लेखक )
अर्जुन केसी लेख्नुहुन्छ (२०७८ असार २७ आइतबार ९:५० pm )
शाकाहारी मानिसमा रिसराग, व्देष निकै कम हुन्छ । अनावश्यक महत्वाकाँक्षा पनि शाकाहारी व्यक्तिमा हुँदैन । शाकाहारी मानिसमा न कसैको डाहा हुन्छ । ..........हावा
कुसुम जैसी लेख्नुहुन्छ (२०७८ असार २७ आइतबार ९:४७ pm )
उपयोगी लेख । धन्यवाद लेखक मुनाजी ।
अरण थापा लेख्नुहुन्छ (२०७८ असार २७ आइतबार ९:४५ pm )
शाकाहारी मानिसमा न कसैको डाहा हुन्छ । न त कसैप्रति शंका नै हुन्छ । ============ गलत कुरा मुनाजी । म शाकाहारी केटीमान्छेबाटै पिडित छु ।
एउटा यात्रा थालौँ !
गण्डकी प्रदेशको निर्णय पार्टीलाई निकै महंगो पर्नेछः डा. शेखर कोइराला
यातायात व्यवसायीले र्सावजनिक सवारी साधनको साँचो प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए
सरकार सञ्चालन गर्न गठित कार्यदलको बैठक बस्दै
कार्यदलका नेतासँग ओली–नेपाल समूहका नेताले छलफल गर्दै
काभ्रेमा सामुदायिक विद्यालयमा पठपाठन सुरु
सुन प्रतितोला ९२ हजारमा कारोबार
पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको हुँ, प्रचण्डले भनेझैं ढलेको छैनः भीम रावल
एमाले एकताका लागि ओलीले अध्यक्ष छाड्नुपर्छः रामकुमारी झाँक्री
"कार्यक्रममा आउनका लागि निम्तो गरेँ,मास्क नभुल्नुहोला !"
१४ औँ महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्ने कांग्रेसको निर्णय
ओलीले माधव नेपाललाई विषवृक्षसँग तुलना गरेपछि
एमालेले भन्यो: सासंदले विपक्षी दलका नेतालाई मत दिएर अक्षम्य अपराध गरे